Featured - 2019 NAB Ratidza Nhau ne Broadcast Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Ratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE
musha » Featured
Sezvo iwe unofanirwa kuva we 21 yemakore uye kunyange kufema muLas Vegas, takasarudza 21 yepamusoro mavara (mamwe ayo ari "vagari vomunharaunda-chete" mavara, asingatauri kune vatashanyi) kuti vawane grub inonaka-inonaka Inowanikwa! Cherechedza iwe, kwete vose vanozofarira nzvimbo dzose, asi ndakawana ruzivo runogutsa pane imwe neimwe! ...
Kwete vakawanda vakasiyiwa avo vanogona kuvhura kuti 1945 ive gore rinofadza - rakaona kuguma kwehondo huru yepasi rese iyo yakambove yakambozivikanwa; Mutungamiri mukuru wekuAmerica wekuAmerica nguva dzose apo Franklin Delano Roosevelt (mutungamiri wedu we32nd) akapfuura nekusingaperi uye akazobudirira naVaMutevedzeri weMutungamiri Harry S. Truman; Sangano reUnited Nations rakarongwa uye rakagadziriswa ...
Chigadzirwa chekare chakagadzirwa kare, kusvika kure, ndiro Layard Lens (aka: "Nimrud Lens"); Yakawanikwa neAH Layard mu1853 uye yakapoteredza makore 3000 (nezve 750BC-710BC muNyika yeAsia). Yakawanikwa muKalhu, guta reimba ramambo Tiglath-pileser (mumazuva ano, ndiyo Nimrud muIraq) muNorth West Palace. Itsva ...
Boston based axle ai iri munhau zvakare. Iyi ikambani yekupayona, inoramba ichitsvaga zvisingatauri zvinodikanwa zvekufambiswa kwepurogiramu yekutsvaga mavhidhiyo nekugadzirisa mashandisi emakwikwi maduku kusvika pakati pezana, yakaparidzira vhiki yapfuura, kutangwa kweexie ai GearTM, inobatanidza nzira inobatanidza mutsva weMicro Mac mini computing simba ne axle ai's-browser-based
Postium Korea, Ltd., muumbi uye mugadziri wekutsvaga mavhidhiyo ekugadzirisa mazano ekubudiswa kwemifananidzo nekufambisa mifananidzo, anofara kuzivisa kusarudzwa kwePottium America sevanoparadzira ivo chete kuNorth uye kuSouth America. Postium America ichapa nyanzvi mazano pamusoro pekusarudzwa kwezvigadzirwa uye kushandiswa uye kupa michina kuburikidza ne-value-added reseller channel vanobatana munyika dzose dzeAmerica. "Tinofara ...
- Kuwedzerwa kubatana kusanganisira mapepa paNAB Show New York - WASHINGTON, DC - The Travel Video Awards (TVAs) ichadzoka zvakare paNAB Kuzviratidza musi waApril 9 muLas Vegas. Yakasikwa naCitizine Networks, Inc., zvikomborero zvinokurudzira mavideo uye mavambo anofambisa akabudiswa mu2018 nevanomiririra vhidhiyo, vhizha rekufambisa, makambani ezveshau uye mararamiro ehupenyu. NAB Anokwezva ...
Sangano reNational Association of Broadcasters riri kugamuchira mapepa emagetsi ekugadzira yeBroadcast Engineering uye Information Technology Conference (BEITC) pa2019 NAB Show, yakaitwa muna April 6-11 muLas Vegas. Sangano re Broadcast Engineering uye Information Technology rakagadzirirwa vashanduri vekuparadzira uye vadzidzisi, vashandisi vechibvumirano, vanogadzira zvigadzirwa zvemagetsi, vaparidzi, vayanisi vekugadzira, vashandisi veR & D, vadzidzisi veIt uye vese vanofananidza teknolojia. The ...
Nhepfenyuro yechitanhatu yakashandiswa HDR uye 4K Ultra HD paTechnicolor PostWorks Chechipiri uye yekupedzisira Emmy yaakakunda mhedziso yeAmerica, nguva yekupikisa inonzi 1980s munguva yeCold War, ichangobva kupera muHDR uye 4K Ultra HD paTechnicolor PostWorks mu New York. Kubva nyaya mbiri, kutarisa kwekatevedzana kwakaguma ...
Page 1 pamusoro 7012345	»	102030...Last »